IPad Mini vaovao, ny mini an'ny Apple dia lasa Pro | Vaovao IPhone
Omaly nitazona ny Keynote i Apple tamin'ny volana septambra 2021. Keynote iray izay mifantoka hatrany amin'ny fandefasana iPhone sy Apple Watch ary izany no nahatanterahany. Fitaovana vaovao an'ny iPhone 13, ary ny Apple Watch Series 7 andrasana kely ihany satria tsy nitondra famolavolana vaovao. Saingy te-hanaitra anay hafa ihany koa i Apple: ny iPad Mini vaovao. IPad vaovao misy refy kely ahazoana ny endrik'ireo iPads mpandimby vaovao ao amin'ny faritra Pro. Vakio hatrany fa lazainay aminao ny antsipiriany rehetra ...
Araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha, miverina amin'ny vaovaontsika ny iPad Mini ary manao izany amin'ny fomba tsara indrindra. Matetika izahay dia niresaka momba ny fahaizan'ny iPad Mini, ny iPad tonga lafatra hitondra azy io isan'andro sy indrindra ny mifanentana amin'ny Apple Pencil. Apple dia nitondra taminay ny zavatra tadiavinay: Apple Mini miaraka amina endrika iPad Pro, famolavolana izay efa manana iPad Air farany teo, ary ankehitriny dia tonga amin'ilay kinova kely (sy be mpampiasa) ny iPad.
Ny efijery an-tsisiny misy sisiny manify sy zorony boribory, 8,3 santimetatra. Izy rehetra arovan'ny trano fonenana aluminium 100% voaverina amin'ny Space Grey, Pink, Volomparasy na Star White. Ny efijery (500 nits) eny an-dalana dia mitohy miaraka amin'ny teknolojia True Tone ary a gamut miloko malalaka izay mampihena ny fisaintsainana ary mamela antsika hanana loko mazava sy lahatsoratra maranitra.
Ary raha ny iPad Mini teo aloha dia nifanaraka tamin'ny Apple Pencil tamin'ny taranaka voalohany, amin'ity indray mitoraka ity Apple dia mampifanaraka azy amin'ny Apple Pencil amin'ny taranaka faharoa (amidy mitokana ho an'ny 135 €), Pencil izay mifamatotra amin'ny sisin'ny iPad Mini ary miakatra tsy misy tariby mihitsy aza.
Manaraka ny fahalianan'ny Apple amin'ny fiarovana, amin'ity tranga ity izy ireo dia manaraka ny dian'ny iPad Air farany sy ampidiro ny Touch ID eo amin'ny bokotra ambony an'ny iPad Mini. Touch ID izay tadiavin'ny maro ho hita amin'ny iPhone fa toa tsy ho tonga akory izany. Ary ianao, tianao kokoa ny Touch ID noho ny Face ID?
Eny ary, miatrika iPad Mini isika miaraka amin'ny fetra tokony haterak'izany, ny marina dia te-hametraka ny karatra ambony latabatra i Apple ary naka ny iPad Mini ho amin'ny ambaratonga avo kokoa. Mazava ho azy fa tsy mampiditra ny processeur M1 an'ny iPad Pro izy io, fa amin'ity iPad Mini vaovao ity dia manana ny vaovao A15 Bionic, processeur izay hiakatra eny amin'ny iPhone 13 sy 13 Pro. ny CPU enina enina mampanantena fa ho haingana 40% ary hanana izany aza izy Masinina Neural an'ny Apple izay hanatsara ny hafainganam-pandehan'ny sasany workflows. Raha ny fanazavana, hoy i Apple, ny iPad Mini dia manana GPU manan-danja dimy, tonga lafatra amin'ny fampandehanana ny lalao tsara indrindra, na amin'ny fetran'ny fampiasa amin'ny famolavolana.
El USB-C dia manao ny fisehoany mamirapiratra amin'ity iPad Mini ity ho hany seranana, dia hamela antsika hibaiko azy io na hampiasa fitaovana fanampiny mifanaraka amin'ny USB-C (na dia kapila mafy ivelany). Ary amin'ny resaka fifandraisana dia te-hitondra ny iPad Mini amin'ny haavon'ny iPhone 13 vaovao i Apple: Fifandraisana 5G sy Wi-Fi andiany faha-6, ny fifandraisana haingana indrindra eny an-tsena.
Tsy hifantoka be amin'ny fiasa amin'ny fakantsary aho, Tsy mbola mpiaro ny fakantsary iPads mihitsy ahoNa dia ho gaga aza ianao hoe firy ny olona mampiasa ny iPads ho fakantsary lehibe. Mahavariana ny fiovan'ny fakan-tsary eo anoloana izay mahatratra 12 megapixel misy zoro somary malalaka, ary araka ny hitantsika tamin'ny iPads hafa dia hanana ny famolavolana afovoany izay hahafahantsika manatsara ny antso an-tsary. Ny fakan-tsary any aoriana koa dia mihatsara amin'ny zoro malalaka izay hanatsara ny sarintsika ary na dia ny antonta-scan aza.
IPad Mini izay azontsika tantanana ao amin'ny tranokala Apple ary afaka manao izany isika mandray ny zoma 24 septambra ho avy izao. Rehetra amin'ny vidin'ny € 549 amin'ny safidy mora indrindra (64 GB amin'ny kinova Wifi), hatramin'ny 889 € amin'ny vidiny ambony indrindra (256 GB amin'ny kinova Wifi + 5G). Safidy lehibe handraisana raha toa ianao ka liana amina fitaovana tena mahomby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IPad Mini vaovao, Apple's mini mandeha Pro
Tsia, ny iPhone 13 dia tsy mampiseho ny isan-jaton'ny batterie ao amin'ny tsipika fizarana